Momba anay - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd.
Cixi Wenap International Trading Co., Ltd. dia mpamatsy vaovao ety anaty aterineto, fa manana traikefa momba ny fahaizana 5 taona mahery. Ny orinasanay dia miompana amin'ny fikarohana, famokarana sy fivarotana karazan'akanjo rehetra tsy tapaka sy tsy misy endri-tsoratra, fantsom-barotra, metisy fehy, pex Pipe, fitaovana hydraulic sy fitaovana Hardware. Ny vokatray dia ampiasaina amin'ny sehatry ny rafitra fanorenana ho an'ny indostrian'ny fanorenana, amin'ny milina fanorenana, famokarana fiara, orinasa indostrialy, rafitra sanitaitra, asa-drano ary sehatra hafa. Manana ekipa fikarohana sy fikarohana matihanina isika mba hamolavolana vokatra vaovao isan-taona, mamokatra ihany koa araka ny tarehimarika mpanjaitra na samples, ny fankatoavan'ny orinasa OEM sy ODM dia omena antsika. Manatsara mandrakariva ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny famolavolana, ny famokarana ary ny fikarakarana tanteraka.
Ny orinasanay dia ao amin'ny tanànan'i Cixi tsara tarehy, akaikin'ny tetezana mahazatra Hangzhou, any amin'ny faritra midadasika "golden triangle" ao Shanghai-Hangzhou-Ningbo. Ny toerana misy ny orinasanay dia akaiky ny seranan-tsambo ao Ningbo (port de Beilun), dia tsy lavitra ny seranan'i Ningbo. Manana fitaterana mora isika amin'ny toerana ara-jeografika.
Noho ny vidin'ny fifaninanana amin'ny vokatra avo lenta, ny famindrana amin'ny fotoana sy ny vokatra vita, dia nahazo tambajotra iraisam-pirenena izahay mba hahatongavana any amin'ny firenena 20 sy faritra maherin'ny 20 eran-tany. Ny ekipan'ny varotra dia tena matihanina ary manolo-tena, mety hahatsapa maimaimpoana amin'ny fifandraisana aminay ianao raha te hahafantatra bebe kokoa, raha liana amin'ny vokatrao izahay.
Fanamby vaovao, fahafahana vaovao! Misaotra anao izahay handefa fanadihadiana ary mifandray aminay amin'ny fiaraha-miasa! Misaotra betsaka anareo nitsidika ny tranokalanay. Hanome anao fahafaham-po amin'ny vokatra sy ny serivisy izahay.
Mirary tontolo andro finaritra